I-Oppo K3 ngoku igosa: fumana yonke into malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Oppo K3 ngoku isemthethweni: fumana yonke into malunga noluhlu oluphakathi
NjengoXiaomi, Samsung, iHuawei kunye neNhlonipho, u-Oppo yenye yeenkampani ezisebenzayo kwimveliso yefowuni ephathekayo. Oku, emva kokumilisela Na A9X Ngaphantsi kweveki edlulileyo, ngoku iza ilayishwe ngesixhobo esitsha.
Imodeli ngoku ethatha indawo kwinqanaba le-Oppo K3, phakathi kwebanga kunye nekhamera ye-pop-up eza nolindelo oluphezulu lokuthengisa, njengoko iinkcukacha kunye neempawu zayo ziyayixhasa ngendlela enkulu, nangona ingekho ngaphezulu kwexabiso layo lemali, elilunge kakhulu. Masiyazi ngokucokisekileyo!
1 Iimpawu ze-Oppo K3 kunye neenkcukacha
Iimpawu ze-Oppo K3 kunye neenkcukacha
Into yokuqala esiza kuqala ukuyicacisa le mobile yile Iscreen sayo, esisebenzisa itekhnoloji ye-OLED kwaye ine-diagonal ye-6.5 intshi. Oku, kunokuba kungenjalo, ibonelela ngesisombululo esigcweleyo se-2,340 x 1,080 pixels kunye ne-19.5: 9 factor ratio.
Iphaneli ikwagcinwe ngabambalwa imiphetho ephezulu kakhulu ebhityileyo nangasecaleniNangona singekhe sithethe ngokufanayo malunga nesezantsi, icace gca; ngenxa yoko, sifumana I-91% yomlinganiso wesikrini ukuya komzimba. Ngokucacileyo, njengoko inekhamera ezivelelayo, ayinalo naluphi na uhlobo lwenotshi. Kodwa, ngokungathi konke oku akwanele, inesizukulwane se-6 esikrinini sokufunda ngeminwe esikrinini, esikhawulezayo kwaye sichanekile, kwaye indawo yayo yokuskena inkulu kunezo ziqhelekileyo ezifumaneka kwiindawo ezininzi ezihambayo.
Iprosesa eyixhobisayo yenye yezona zidumileyo ngoku phakathi kuluhlu oluphakathi, olungekuko okunye ngaphandle kwe Snapdragon 710, I-SoC yaziswa nje kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ezibonelela ngokusebenza ngokuqinileyo nangokugudileyo. Le chipset iyakwazi ukuqhuba phantse nayiphi na iapp kunye nomdlalo obekwe phambi kwayo, nangaphezulu ukuba idityaniswe nomthamo wememori ye-RAM kunye neROM, efikelela kwi-8 GB LPDDR4X kunye ne-128 GB, ngokulandelelana, kuhlobo lwayo oluphezulu. Kukho iinguqulelo ezimbini ezimfutshane, i-6 + 64 GB kunye ne-6 + 128 GB; yonke ibhetri ye-3,765 mAh ene-3.0-watt VOOC 20 yetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza.
Ngokubhekisele kwisebe lokufota, i-Oppo K3 iza nekhamera ngasemva emibini, ene-16-megapixel sensor yokuqala kunye ne-2-megapixel sensor sensor. Zombini ezi khamera zixhotyiswe nge-flash-LED ezimbini, i-Artificial Intelligence-optimised mode portrait, AI scene detection, Ultra Clear Night View 2.0, Handheld Night Scene Mode, kunye ne-multi-frame frame technology technology, ngelixa kwelinye icala, pop -sens sensor yi-16 MP, enezibonelelo ze-AI kunye nobuhle bobuso.
Inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie incasa ColorOS 6.0 iza kulayishwa kwangaphambili kwisixhobo. Iimpawu zokuphucula inkqubo zika-Oppo zikwabandakanyiwe kwifowuni, njengeGameBoost 2.0, inqaku lomdlalo wokukhawulezisa ukusebenza kweGPU ngamaxesha emfuno ephezulu yamava emidlalo alula.
IsakheloBoost sikwabandakanyiwe ukwaba izixhobo zenkqubo ngokweemfuno ezithile zoovimba bomdlalo. Kwelinye icala, i-LinkBoost 2.0 inceda ukuphucula ukusebenza kwenethiwekhi kwi-smartphone. Okokugqibela, iTouchBoost inceda ukuphucula impendulo yescreen.
ISIKHUMBUZO 6.5 "i-FullHD + i-OLED ineepikseli ezingama-2.340 x 1.080 (19.5: 9)
INKQUBO IQualcomm Snapdragon 710
i-RAM 6 okanye 8 GB
ISithuba sangaphakathi esigciniweyo 64 okanye 128 GB
IINKCUKACHA Ngasemva: I-Dual 16 + 2 MP ene-flash ezimbini ze-LED kunye ne-AI / Ngaphambili: I-MP ye-16 (i-pop-up) ene-AI kunye nokuhombisa ubuso
IBATTERI I-3.765 mAh ene-3.0 W VOOC 20 ebiza ngokukhawuleza
INKQUBO YOKWENZA I-Android 9 Pie phantsi kombalaOS 6
UQHAGAMSHELWANO I-Wi-Fi / iBluetooth / iDual-SIM / 4G LTE Inkxaso
IIMPAWU ZE-OTRAS Iscreen seFingerprint Reader / Ukwamkelwa kobuso / Umdlalo weBox 2.0 / iTouchBoost / IsakheloBoost / IkhonkcoBoost 2.0
Ukuthengisa kwangaphambili kweefowuni kuqala namhlanje e-China, Ivenkile ye-Oppo ekwi-intanethi kunye nezinye iisayithi zamaqabane athengisa kwi-Intanethi. Ukuthengiswa kwamahlelo e-6GB ye-RAM kuya kuqala nge-1 kaJuni, ngelixa umahluko we-8GB ye-RAM uya kuthengiswa kamva kwinyanga enye. Zonke zinokuthengwa ngemibala efana neNebula Purple, Morning White, kunye neFama emnyama. Amaxabiso ami ngolu hlobo lulandelayo:
Oppo K3 6 + 64GB: I-1,599 yuan (~ 206 euro).
Oppo K3 6 + 128GB: I-1,899 yuan (~ 245 euro).
Oppo K3 8 + 128GB: I-2,299 yuan (~ 297 euro).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo K3 ngoku isemthethweni: fumana yonke into malunga noluhlu oluphakathi
Amalungelo awodwa abenzi be-Asus avela abonisa ii-smartphones ezahlukeneyo zoyilo olwenziweyo
I-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumana uhlaziyo olukhulu ngophuculo olwahlukeneyo